Nezvedu - Qingdao TianHua Yihe Foundry Factory
Tine Anopfuura Makore makumi maviri EMetal Processing uye Kugadzira Chiitiko
Qingdao TianHua Yihe Foundry Factory iri muguta rakanaka rechiteshi cheQingdao, tine makore makumi maviri ruzivo mukugadzira zvigadzirwa zvesimbi. Isu tinopa yakasarudzika simbi yekugadzira zvigadziriso zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvinosanganisira prototyping dhizaini, dhizaini kushandura, kugadzira, kutonga kwemhando, mishumo, kudhinda, kurongedza, kurodha uye kutumira mhinduro. Yedu kunyanya sevhisi yekugadzira simbi inosanganisira sheet simbi uye kugadzirwa kwechubhu, inosanganisira kucheka simbi (saw, laser, murazvo, plasma), kupeta simbi (kupeta pepa, chubhu / tsvimbo / chikamu kupeta, kusungirirwa kwechubhu), kutsika kwesimbi, kudhirowa kwakadzika, CNC. punching, welding and fabrication, assembly and surface finishing.
Nemainjiniya ane ruzivo, vashandi vane hunyanzvi uye midziyo yepamusoro, zvigadzirwa zvedu zvinotsamira pamhando yazvo yakagadzikana uye chitarisiko chinoyevedza chave kuzivikanwa nemisika yemumba neyekunze. Pamusoro pezvo, tinopa ODM/OEM sevhisi zvinoreva kuti zvigadzirwa zvedu zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Zvese simbi zvikamu zviri kutengeswa zvakanaka kuUK, Germany, Italy, Norway, Greece, India, Pakistan, USA, Canada, Chile, Mexico, New Zealand, Australia etc.Customers akadai Siemens, Coca Cola, PCORE, LAPP, FMC, JETWAY EMD Technologies nezvimwe.
Basa re Thyhmetalfabndeyekupa mhando dzakagadzirwa zvigadzirwa zvesimbi uye masevhisi pamitengo inokwikwidza. Mukuita izvi, tinobata vatengi vedu, vashandi uye vatengesi nenzira yakanaka uye yakaenzana. Chinangwa chedu ndechekugadzira musangano wakasarudzika uye wepasirese wekugadzira simbi ine michina yemhando yepamusoro uye manejimendi, kugadzirisa zvakajairwa pepa rekugadzira simbi zvinodiwa.
Kwedu Vatengi, tinopa masevhisi ega ega ega ega simbi yekugadzira uye chaiyo inorema simbi yekugadzira. Kushandisa nzira yekubatana kuzadzisa zvinodiwa zvakasiyana-siyana zvevatengi. Kupfuurirazve, tinoedza kuve mugadziri ane mutengo wakaderera wezvigadzirwa zvemhando yepamusoro tichichengetedza kugona kupindura kumisika yakaoma.
Zvedu Vashandi, tinopa nharaunda inonakidza uye ine mubairo yekukurudzira kudzidza, kushanda pamwe nekukura kwevashandi vese.
For Thyhmetalfab, isu tinofanirwa kuwana purofiti inonzwisisika kune vanogovana, vashandi uye kudzoreredza kukwikwidza mune ramangwana, kusimudzira kambani ine budiriro yakakura uye kuwedzera.
Thyhmetalfab Zvigadzirwa & Michina
Zvigadzirwa zvakakwana zvinobva mukugadzirwa kwakakwana uye midziyo yatinoshandisa, nhamba huru yemidziyo yekugadzira inoshandiswa senge michina yekucheka yeLaser, michina yekuveura ndiro, NC punching Machine, NC yekubhenda muchina, muchina wekugadzira simbi, chigayo. muchina nezvimwe. Uyezve, vashandi vedu vemaneja nevashandi vakavhurika kuti vaenderere mberi nekuvandudzwa kuti vasvike padanho repamusoro rekugutsikana kwevatengi mukurongedza, kumaka, uye kutumira. Vashandi vedu vakadzidza zvakanaka vanogara vakagadzirira kupa mhinduro nekukurumidza kune zvinodiwa nevatengi pakutaurirana kwakanaka. , mharidzo yakarurama yezvinyorwa, uye kutumirwa nenguva nguva dzose.
Tichisimbirira padzidziso ye” Hunhu Hwakanakisisa, Sevhisi Yakanakisa”, tiri kutarisira kuvaka hukama hwebhizinesi hwenguva refu newe kuti mubatsirikane. Vatengi vanobva pasirese vanogamuchirwa kutibata nesu.